०.६३% घटेर नेप्से २९२९.२९ विन्दुमा, ५ अर्ब १९ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
भदौ २९, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १८ दशमलव ५४ अंक अर्थात् शून्य दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ९२९ दशमलव २८ विन्दुमा झरेको हो । मंगलवार कारोबारमा आएका २२२ ओटा कम्पनीको १ करोड ६ लाख ३९ हजार ८२६ कित्ता शेयरको ५९ हजार ८५४ पटकमा रू. ५ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९५ हजार ४४३ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका कम्पनीहरु मध्ये दुई ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट लागेको छ । यो दिन मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
यो दिन शेयरमूल्य घट्नेमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १९ हजार ४५० मा आइपुगेको हो । दोस्रोमा सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड २ को इकाई मूल्य ३ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो दिन सर्वाधिक शेयर कारोबार भने अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २७ करोड ३ लाख ७० हजार बराबरको खरीदविक्री भएको छ । दोस्रोमा रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको रू. २२ करोड ७९ लाख ८१ हजार बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यो दिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २१ प्रतिशत, व्यापार समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको १ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी हाइड्रोपावर समूहको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत,वित्त समूहको शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य द शमलव ९८ प्रतिशत,अन्य समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत,माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो दिन कारोबार रकम पनि सोमवारको तुलनामा घटेको छ । सोमवार रू. ९ अर्ब २ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको थियो ।